श्रीमानलाई देखाउनकै लागि भएपनि अर्को बिहे गर्न चाहन्छु म ! - समृद्ध नेपाल
श्रीमानलाई देखाउनकै लागि भएपनि अर्को बिहे गर्न चाहन्छु म कोही केटा छन् रु भने सम्पर्क गर्नुहोस् ।म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो ।हामी दुई श्रीमान् श्रीमती हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो ।
हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो ।घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो । एक दिन श्रीमान्ले केके सुनेर आउनुभयो, अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो । त्यो दिनदेखि त मेरा श्रीमान्ले सँधैँजसो केही न केही इजरायलका बारेमा नयाँ कुरा ल्याएर मलाई दिनहुँ जसो सुनाउने गर्न थाल्नुभयो ।
एक दिन मैले झर्को मान्दै भने हामीलाई के काम इजरायलको गफ । न जाने गाउँको बाटै नसोध्नू ।किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल १ अब त केटाकेटी पनि ठूला हुँदै गए, भोलि उनीहरूको उच्च शिक्षाका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हाम्रो कमाइ तन्किने होइन बरु म यहाँ केटाकेटी स्याहारेर बस्छु तिमी जाऊ इजरायल र हाम्रो पनि आर्थिक हैसियत अलि उकासौँ ।
पल्सर सिरिजको सबैभन्दा कान्छो पल्सर १२५ को बिक्री सुरु जन्नुहोस कति छ मूल्य !
नमस्कार म समृद्धि खड्का आज कोठाको कुनामा फ्याकिएका मेरा किताबहरुको कुरा मेरो कानसम्म ! पर्यो !
तपाईहरुलाई बोर लागेको छ आउने होस् म संग घुम्न जाउ तपाई हरुले चाहेको सबै दिन्छु !
तेस्रो तला बन्दा यस्तो देखियो धरहरा धमाधम बन्दै !
उदयपुरमा अबैध काठ तस्कर समातिय !
म्याग्दीमा फैलियो अर्को रोग, एकै दिन चार जना संक्रमित !
मनिषाले भावुक हुँदै भनिन्, मेरो बच्चा हुन्छ भन्ने सोचेर नै हतारमा विवाह गरेकी थिए तर यस्तो होला भनेर सोचेको थिएन !
धुर्मुस-सुन्तलीको वियोगान्त रंगशाला यात्रा : चन्दा उठाएर समाजसेवा कि ठगी ?
कोरोना भाइरसको क्रिसमसपछि अर्को लहर आउने विज्ञको चेतावनी !
काठमाडौंका यी १६ ठाउँबाट निस्किँदैछन् जुलुस